မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား လူသိနည်းတဲ့ အလှအပ tips လေး ၅ ချက် | CosmeticMyanmar
Home » Article » မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား လူသိနည်းတဲ့ အလှအပ tips လေး ၅ ချက်
ဟယ်လို ဟယ်လို သတင်းကောင်းလေးပေးမယ်နော် 👀👀 အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကို ငွေကုန်ကြေးကျသက်သက်သာသာနဲ့ ဖန်တီးလုပ်ကြည့်လို့ရမယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားကြလား? ကဲ ဒါဆိုရင် စမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်
💁‍♀️💁‍♀️ကြည်လင်ဝင်းပတဲ့ မျက်နှာနဲ့ မျက်ဝန်းလေးအတွက်
Green tea ထုပ်လေးတွေကို toner အဖြစ်သုံးကြမယ်။ green tea အထုပ်လေးတွေကိုရေနွေးလေးနဲ့ စိမ်ထားလိုက်ပါ။ ရလာတဲ့ ရေနွေးကို အအေးခံပြီး spray ဘူးအလွတ်တစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီး မျက်နှာသစ်ပြီးတဲ့ အချိန် ဒါမှမဟုတ် လန်းဆန်းသွားအောင် mist အနေနဲ့ ဖြန်းပေးလို့ရပါတယ်။ ရေစိမ်ထားပြီးတဲ့ tea အထုပ်လေးတွေကိုလည်း ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထည့်ထားပြီး မျက်ဝန်းလေးတွေပေါ်ကပ်ပေးပါက မျက်ကွင်းညိုတာတွေ၊ မျက်လုံးရောင်ရမ်းတာတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ခေါင်းမဖြီးခင် ဘီးမှာ မိမိသုံးနေတဲ့ရေမွှေးလေးကို 15 cm လောက်အကွာကနေ နှစ်ချက်လောက် ဖြန်းပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်ပုံမှန် ခေါင်းဖြီးနေကြအတိုင်း ဖြီးပေးလိုက်ပါ။ တစ်နေကုန် ဆံသားလေးတွေက သင်းပျံ့မွှေးကြိုင်နေမှာပါ။ This is good !
အာလူးတစ်လုံးကိုအခွံနွှာပြီးထက်ခြမ်းခြမ်း လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ၂ မိနစ်လောက်ဆက်တိုက် ချိုင်းကိုပွတ်တိုက်ပေးပါ။နဂိုထက်ဝင်းလက်လာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ ၇ ရက်လောက်ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ရင် သိသိသာသာပြောင်းလဲလာတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ This is good too!
💄💄ကျိုးသွားတဲ့ lipstick လေးတွေကို အကောင်းအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားအောင်
အရမ်းကြိုက်ရတဲ့ lipstick လေးတွေ ကျိုးသွားရင် လွှင့်မပစ်လိုက်နဲ့နော်။ အဲ့ဒီကျိုးသွားတဲ့ အပိုင်းလေးကို ဇွန်းထဲကိုထည့်ပြီး ဖယောင်းတိုင်ပေါ်မှာအရည်ပျော်တဲ့ အထိအပူပေးလိုက်ပါ။ ရလာတဲ့အရည်တွေကို ကုန်သွားတဲ့ eyeshadow ကွက်လေးတွေထဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်ကပ်မှန်ထည့်တဲ့ခွက်အလွတ်ထဲမှာထည့်ပြီး အအေးခံထားလိုက်ပါ။ ခြောက်သွားရင်တော့ lipstick brush လေးနဲ့ပြန်ဆိုးလို့ရတာပေါ့။
👠👡👢Heels တွေအချိန်ကြာကြာစီးတာကြောင့် ခြေထောက်နာကျင်ခြင်းမှကင်းဝေးအောင်
High Heels လှလှလေးတွေကို တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးနိုင်အောင် စီးချင်ကြတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် အချိန်ကြာတာနဲ့အမျှ ခြေထောက်လေးတွေ နာကျင်လာတဲ့ဒဏ်ကို ဘယ်လိုဖြေဖျောက်ကြမလဲ? နည်းလမ်းကတော့ tennis ball လေးကို ၂ မိနစ်ကနေ ၅ မိနစ်လောက် ခြေထောက်အောက်မှာလှိမ့်ပေးလိုက်ပါ။ ညောင်းညာတာတွေသက်သာသွားပါလိမ့်မယ်
ဒီ tips လေးတွေက လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး လိုက်လုပ်ရတာလည်းမခက်ခဲပါဘူးနော်။ ချစ်တို့လဲအသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။😘😘😘
TOTAK REPLENSHING EYE CREAM